FAMATSIANA JIRO : Miroso amin’ny fanavaozana ny Jirama, Distrika 50 hisitraka hazavana an-dalam-be
Nifanandrify indrindra tamin’ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny fahazavana nosokafana omaly, teny Ambohimanambola, ny tetikasa vaovaon’ny orinasa Jirama entina handrakofana hazavana an-dalam-be ho an’ireo renivohitry ny Distrika 50 manerana ny Nosy. 10 décembre 2020
Tafiditra ao anatin’ny fanatanterahana ny veliranon’ny Filoham-pirenena amin’ny fanomezana hazavana ho an’ny rehetra ity hetsika ity. Tanàn-dehibe iray isan’andro farafahakeliny no horakofan’ny Jirama jiro ary hatramin’ny faran’ny taona 2020 no hanaovana izany. Jiro « Cobras » mitsitsy, tsy mandany herinaratra kanefa mazava lavitra noho ireo izay nampiasaina hatramin’izay no haparitaka.
« Hamerina indray ny fahazavana an-dalam-be manerana ny renivohitry ny Distrika no tanjon’ny orinasa Jirama. Hetahetan’ny mpanjifa izany ary mamaly izany araka izay azo atao ny Jirama. Hiasa haingana izahay, izany indrindra no antony namoronana ity hetsika ity. Sady mazava no mitsitsy ary tena manaraka ny toetrandro ity fitaovana vaovao nozaraina ity », hoy ny Tale Jeneralin’ny Orinasa Jirama, Vonjy Andriamanga.
Tafiditra ao anatin’ny ady atao amin’ny tsy fandriam-pahalemana sy fanatsarana ny tanàna amin’izao ankatoky ny fety izao ihany koa ity hetsika ity.
Marihina fa hetahetan’ny mponina an-drenivohitra hatramin’izay ny tokony handrakofana jiro ny lalam-be, ny elakelan-trano ary ny toerana rehetra be mpivezivezy amin’ny alina kanefa anjakan’ny asa ratsy. Nanantitra ny Tale Jeneralin’ny Jirama fa ankoatra ny fandrakofana hazavana ny lalam-be, horakofana jiro mandeha amin’ny angovo azo havaozina sy jiro « cobras » mitsitsy avokoa ireny toerana mena ireny. « Efa mandeha ny famatsiana jiro hatrany anaty elakelan-trano, tsy eto an-drenivohitra ihany no hametrahana izany fa any amin’ireo distrika rehetra manerana ny Nosy », hoy hatrany ny fanazavana.
« Optima »
Ankoatra ireo, tafiditra ao anaty tetikasan’ny orinasa Jirama ihany koa ny fanomezana fahafaham-po ny mpanjifany amin’ny alalan’ny fanavaozana ny tarifa ampiasaina. Kendrena amin’io ny tsy hametrahana elanelana amin’ny vidin’ny herinaratra ampiharina amin’ny mpanjifa amin’ny Faritra rehetra manerana ny Nosy. Hatramin’izay, tsy mitovy ny vidin’ny kwh ho an’ny mpanjifa na samy eto Madagasikara aza. Lafo indrindra izany ho an’ny Faritra avaratra tahaka ny any Sava sy Diana izay tafiditra ao anatin’ny « Zone 3 ». Hisy araka izany ny torolalana omen’ny Jirama ny mpanjifany ho fampahafantarana azy ireo ny kazarana tolotra mifanaraka amin’ny fandaniany avy.
Tarifa miisa efatra moa amin’izao fotoana no omen’ny Jirama. Ny ambany indrindra amin’io dia ny tarifa 14, natokana ho an’ireo tokantrano tsy mandany mihoatra ny 100kWh. Ho an’ireo mampiasa fitaovana mitroka herinaratra kosa, tsy maintsy ny tarifa « superconfort » no ampiasainy. Mety hiova arakaraka ny tarifa ampiasaina koa anefa ny vidin-jiro aloha.
Tsara araka izany raha faritana tsara ny fandaniana ao an-tokantrano mialohan’ny hamaritana ny tarifa ampiasaina. Mihena hatramin’ny roa isan-jato ka hatramin’ny 13 isan-jato ny vidin-jiro rehefa mihatra ny « Optima » fanavaozana vaovao napetraky ny Jirama. Mila mitandrina nefa ny mpanjifa satria raha mandany mihoatra ny 155kWh izy ireo amin’ny tarifa 14 dia mety hitombo hatrany amin’ny 48 isan-jato indray ny faktiora.